शनिबार, ५ असाेज
मुक्त कमैयाको अमुक्त पीडा ४ असोज २०७६
मिस्टर कर्नः मकैको मःमः र चाउमिन ! बफ, भेज, चिकेन र मटन मःमः तथा चाउमिनबारे त धेरैलाई थाहा छ । तर, काठमाडौंमा एउटा यस्तो रेष्टुरेन्ट छ, जहाँ मकैको मःमः तथा चाउमिन पाइन्छ । जहाँ हरेक दिन खाजा खान जानेको भीड लाग्छ । ४ असोज २०७६
कहिले र कसरी सुरू भयो फुटबल ? फुटबल खेल्न जति रमाइलो हुन्छ, हेर्दा उति नै मजा आउँछ । तर, फुटबलको सुरूवात भने उत्ति रमाइलो वा सुन्दर छैन । निकै अराजक छ । ४ असोज २०७६
नौगेडीः वर्गीय समाजको मौलिक कथा नाटकले विभिन्न प्रलोभनमा परी नेपाली चेली बेचिन बाध्य भएको सन्दर्भलाई पनि कलात्मक ढंगमा समेटेको छ । ४ असोज २०७६
आफ्नै कथा रहस्यमयी लाग्ने ‘हजुरआमा’ कथाका रूप फेरिएका छन् । कथाका पात्र फेरिएका छन् । र, समय पनि फेरिएको छ । त्यस्तै, फेरिएको परिवेशको रूप हो, ‘हजुरआमाका कथा ।’ ‘हजुरआमाका कथा’ लेखेकी हुन्, अमृता लम्सालले । जो आफैं हजुरआमा भइसकिन् । ४ असोज २०७६
नवराज लम्सालका प्रिय पाँच पुस्तकः माधवीदेखि गीतासम्म ४ असोज २०७६
रेणुका सोलुः संघर्षपछि सफलताको दस्तावेज छोराहरू शहरबाट घर फर्किंदा क्यासेट काँधमा भिरेर गीत घन्काउँदै जान्थे । घरपरिवारका सबैलाई नयाँ कपडा लिएर जान्थे । रेणुले पनि त्यसै गरिन् । क्यासेट किनिन् । आमाबुबा भाइबहिनीलाई लुगा किनिन् र गीत घन्काउँदै घर लागिन् । छोराभन्दा म पनि के कम ! ४ असोज २०७६
विश्वकै पुरानाे किताब पसलको कथा अमेजन डटकम सुरू भएपछि मान्छेको किताब पढ्ने शैलीमा व्यापक परिवर्तन भयो । सुरूमा अमेजनले घरमै किताब पठाउँथ्यो भने विस्तारै किन्डलबाट डिजिटल स्वरूपमा किताब उपलब्ध गराउन थाल्यो । यसले धेरै किताब पसलको उठिबास भयो । चल्तीका किताब पसलहरू भटाभट बन्द भए । किन्डल आएसँगै किताबका पाना पल्टाउने हातहरू स्क्रिनमा स्वाइप गर्न थालेका छन् । ४ असोज २०७६
विश्वेश्वरदेखि देवकोटासम्मको चिया जक्सन महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि दिउँसो खाजा खान आइरहन्थे । वास्तवमा देवकोटाज्यू नै त्यस्तो जमघटका विशिष्ट व्यक्ति हुन्थे । तिनताका नेपाल भाषा प्रकाशिनी समितिमा वर्षको बाह्रसय रुपियाँँको खान्गी बराबरको जागीर खाने, त्यत्रो ठूलो रकमको जागीर खाने देवकोटा त विस्तारै–विस्तारै राजनीतिमा र पछि त क्रान्तिकै बिगुल फुक्नमा लागेका थिए । ४ असोज २०७६
झूर हिन्दी फिल्मको नक्कल गरेर नेपाली सिनेमा सुध्रदैन थर्ड ग्रेड हिन्दी सिनेमाको नक्कल गरेर नेपाली सिनेमा बनायौं । तर, कोरियन, इरानी सिनेमाको नक्कल गरिएन । नक्कल पनि गतिलोको गरिएन । कुरा के भने, सिनेमा नराम्रो बनाउन पाइन्छ । तर नक्कल गर्न पाइँदैन । ४ असोज २०७६